मृतक निर्मला पन्तलाई आफ्नै दाईले लेखेको अन्तिम पत्र यस्तो छ::Nepal's Online News Portal
मृतक निर्मला पन्तलाई आफ्नै दाईले लेखेको अन्तिम पत्र यस्तो छ
आइत, भदौ १७, २०७५
वर्षीया निर्मला पन्तकी आमा कञ्चनपुर भीमदत्त–१८ उल्टाखाममा चनाचटपटे पसल चलाउँछिन् । निर्मलासँगै कक्षा ९ मा पढ्ने रोशनी बम ९ साउनमा पसलमा आएकी थिइन् । विज्ञानको नोट बनाउनुपर्ने भन्दै निर्मलालाई भोलिपल्ट आफ्नो घरमा आउन अनुरोध गरिन् । उनले निर्मलाकी आमासँग पनि अनुमति मागिन् । रोशनीले २० रुपैयाँको चटपटे किनिन् र आफूसँग पैसा नभएकाले भोलिपल्ट निर्मलासँग पठाइदिने वचन दिएर बिदा भइन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रश्न : एउटै कक्षामा पढ्ने भए पनि निर्मलाभन्दा रोशनी ५ वर्ष जेठी हुन् । बाबुआमा दार्चुलामा जागिर गर्छन् । कञ्चनपुरमा दुई बहिनी मात्र बस्छन् । उनको आर्थिक अवस्था चटपटेको २० रुपैयाँ तत्काल तिर्न नसक्ने होइन । आशंका के छ भने रोशनी बमको घरमा भोलिपल्ट कोही मान्छे आउँदै थियो र उसैका सामु निर्मलालाई प्रस्तुत गर्न यो योजना बनाइएको थियो । उनको घरमा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको आउ–जाउ हुने गरेको छिमेकीहरूको भनाइ छ । यो आशंका असत्य साबित गर्न पनि प्रहरीले रोशनी र बबितालाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिनुपथ्र्यो । प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा नै भन्छन्, ‘रोशनी र बबिता बममाथि अनुसन्धान भएको पनि भेटिएन । त्यसैले अनुसन्धानमै आशंका उठेको छ ।’ कन्चनपुर घटनाका निर्मला पन्तलाई दाईले लेखे यस्तो मनछुने चिठी, हेर्नुहोस…भिडियो….
सन्दर्भ ५ : घटनाको करिब सात दिनपछि प्रहरीले कन्चनपुरकै १७ बर्षीय दिपक नेगी र कैलालीका दिपक घर्तीमागर पक्राउ परे । स्थानीयका अनुसार पक्राउ परेका नेगी एचआईभी संक्रमित हुन् । उनी शारिरिक र मानसिक दुवै पक्षबाट कमजोर छन् । त्यस्तै पक्राउ परेका घर्तीमागर पनि मानसिक सन्तुलान ठिक नभएको व्यक्ति हुन् ।
घटनाको २६ दिन पछि प्रहरीले अभियुक्तका रुपमा दिलिपसिंह बिष्ट पक्राउ गर्यो । बिष्ट पनि मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका व्यक्ति हुन् । प्रहरीले बलात्कार पछि हत्या गरिएको जस्तो जघन्य अपराधमा मानसिक अबस्था बिग्रिएकालाई मात्रै किन अभियुक्त बनाउन खोज्यो ? घटनाको सात दिनपछि पक्राउ परेका नेगी, घर्तीमागर र अहिले अभियुक्त भनिएका बिष्ट तीनै जना शरिरिक र मानसिक अवस्था बिग्रएका भेटिनु संयोग मात्रै होइन । तर, यस तर्फ अनुसन्धान केन्द्रीत हुन सकेन ।
हेडलाइन अनुशारको समाचार भिडियोमा सुन्नुहोला ,भिडियो अन्तिममा छ ,यो समाचार हामिले युटूबमा राखीएको भिडियोको आधारले तयार पारेका छौ , कञ्चनपुरकी १३ बर्षिय निर्मला पन्तको हत्या काण्डमा तत्कालिन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख डिल्ली बिष्टका छोराको संलग्नता रहेको सामाजिक सञ्जालमा आएपनि कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख उपरिक्षक कुबेर कडायतले उनिमाथी कुनै शंका नभएको दाबी गरेका छन् ।
पढाइको सिलसिलामा काठमाण्डौँ रहेका एसपी बिष्टका छोरा केही दिनबाट काम बिशेषले महेन्द्रनगर आएको जानकारी आएपनि उनको संलग्नताको कुनै प्रमाण नभेटिएकाले पक्राउ गर्न नमिल्ने प्रहरी उपरिक्षक कडायतले बताए ।
त्यस्तै मेयर शुरेन्द्र बिष्टका भतिजामाथीपनि कुनै शंका गर्ने ठाँउ नभएकाले उनिहरुमाथी अनुसन्धान नगरिएको उनले बताए । श्रोत :Infokhabar